Imandarmedia.com.np: प्रहरीले नै आउट गर्छ प्रश्नपत्र ! १४ जना गिरफ्तार परेपछि भयो यस्तो खुलासा !
Big News, Main News, News » प्रहरीले नै आउट गर्छ प्रश्नपत्र ! १४ जना गिरफ्तार परेपछि भयो यस्तो खुलासा !
प्रहरीले नै आउट गर्छ प्रश्नपत्र ! १४ जना गिरफ्तार परेपछि भयो यस्तो खुलासा !
मनोज आत्मीय, काठमाडौं ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले सञ्चालन गर्ने विभिन्न विषयको परीक्षाको प्रश्नपत्र गोप्य रुपमा ‘लिक’ गरी आर्थिक अशुल गर्दै आएको अभियोगमा प्रहरीले ठूलो गिरोहलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
यो समूहले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको परीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रहरुबाट नै लिक गर्ने गरेको भनाई प्रहरीको छ । यसरी प्रश्न पत्र लिक गरी प्ररिक्षार्थीलाई दिएवापत रकम अशुल गर्ने गरेको पाइएको छ ।
यो समूहले योजनावद्ध ढंगले त्रिविवि अन्तरगत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सञ्चालन गर्ने प्रत्येक परीक्षाको परिक्षाकेन्द्रबाट नै प्रश्न पत्र लिक गरी आर्थिक रकम लिएर बाड्ने गरेको भनाई प्रहरीको छ । पक्राउ परेका धेरैजसो अभियुक्तहरु विद्यार्थी हुन भने रकम लिएर प्रश्न पत्र लिक गर्नेहरु परिक्षा केन्द्र तोकिएका कलेजहरुमा कार्यरत कर्मचारी हुन ।
उनीहरुले पेशागत इमान्दारिता र मर्यादा उलंघन गरी आर्थिक लाभ लिनका लागि यस्तो कार्य गर्ने गरेको भनाई प्रहरीको छ । पक्राउ सबैजना अभियुक्तलाई सार्वजनिक मुद्धा अन्तरगत कानुनी कारवाही भइरहेको जनाइएको छ।